Shaqaalaha - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > About > shaqaalaha
CIRC waxay u mahadcelineysaa koox aan caadi aheyn oo hirgelinaysa himiladeenna si aan u dhisno cod mideysan oo gobolka oo dhan ah si loo hormariyo loona difaaco caddaaladda muhaajiriinta iyo qaxootiga ku sugan Colorado.
Xubnaha shaqaalaha waa hoos ku taxan sida ay isugu xigaan xarfaha magaca dambe:
Andrea Cota Avila
Andrea waxay ku dhalatay kuna barbaartay Mexico ilaa ay u haajirtay Michigan markii ay jirtay 6 sano. Waxay tagtay Michigan State University waxayna ka qalin jabisay cilmiga Arts iyo Humanities. Soo-gaadhisteeda arrimaha caddaaladda bulshada intii ay ku jirtay xirfadeedii jaamacadeed waxay ku dhiirrigelisay iyada inay ku sii wadato xirfad qaybta aan macaash doonka ahayn.
Sababtoo ah shaqadeeda cilmi baarista ee ardayda Latinx iyo kuwa yar yar ee daraasadaha Chicano / Latino, Andrea riyadeeda waxay ahayd inay u dooddo una dagaallanto xuquuqda bulshada Latinx.Kahor intaadan ku biirin CIRC, waxay lashaqeysay hay'ad aasaasi u ah baahiyaha oo ah Isuduwaha Horumarinta. Aad ayey ugu faraxsan tahay inay ku biirto kooxda CIRC, waxayna rajeyneysaa inay la xiriirto deeq-bixiyeyaasha. Waqtigeeda firaaqada, waxaad ka heli kartaa iyada oo tamashleynaysa gobolka quruxda badan ee Colorado, iyadoo ku tababbaraneysa yoga ama akhris.
Nayda markay ahayd XNUMX jir waxay u soo guurtay Colorado iyada iyo qoyskeeduba waxay ka yimaadeen Puebla, Mexico. Nayda laga soo bilaabo yaraanteedii way ogayd in iyada iyo qoyskeeduba yihiin kuwo aan sharciyeysnayn. Markii ay ku soo barbaartay Colorado Springs, waxay goob joog ka ahayd dhiig-miirashada, dambiga laga galay, iyo takooridda xubnaha qoyskeeda inta badan lagu soo rogay inay yihiin bunni, muhaajiriin aan sharciyeysnayn oo ku nool magaalo siyaasadeed oo muxaafid ah.
Intii ay ahayd arday wax ka barata Jaamacadda Colorado ee Colorado Springs (UCCS), Nayda waxay si adag ugu dagaallantay sinnaanta waxbarashada iyo hay'adeed ee dhammaan ardayda, iyadoon loo eegin xaaladdooda socdaal. Ardaydeeda abaabulka ayaa si lama huraan u noqotay abaabulka bulshada ee Degmada El Paso. Bannaanka xerada, waxay la abaabushay ururada bulshada ee maxalliga ah sida Springs Dream Team, United We Dream (Cutubka Colorado), Pikes Peak Womxn for Liberation, Immigrant Justice Alliance, iyo CIRC.
Kadib markii uu ka qalin jabiyay kuleejka, Nayda wuxuu ka shaqeeyey sharci-dejiye ka saarista / masaafurinta Aurora iyadoo sii wadaysa abaabulka xuquuqda muhaajiriinta. Waxay la jirtay CIRC ilaa iyo 2019 waxaana sharaf u ah inay ka dhex abaabusho bulshooyinka muhaajiriinta ee xoogga ku leh Koonfurta Colorado. Ka sokow abaabulka xagga xoreynta, Nayda sidoo kale wuxuu aad u jecel yahay tacsiyada, buugaagta, cajaladaha, iyo muusikada muusikada Kuuriya.
Marine waxay ka timid Biljam, laakiin nolosheeda inteeda badan waxay ku qaadatay meel ka baxsan dalka: waxay ku soo barbaartay Burundi, waxay wax ku soo baratay Beljam iyo Maraykanka, waxayna ka shaqaysay dhawr sano Morocco. Xamaasad ku saabsan luqadaha iyo dhaqamada kala duwan, waxay heshay Shahaadada Bachelor-ka ee Tarjumaadda (Faransiis, Ingiriis, Carabi) iyo Shahaadada Master-ka ee Luqadaha Bariga iyo Dhaqammada dhow. Rabitaankeeda ah inay caawiso dadka kale iyo inay wax ku biiriso adduun cadaalad ah ayaa ku kalliftay inay raacdo Shahaadada Maareynta Macaashka iyo inay ka shaqeyso arrimaha horumarinta caalamiga. Sannadkii 2017, waxay ku biirtay Ururka Carruurta ee Moroccan, oo ah urur taageera carruurta nugul iyo qoysaskooda ee ku nool Taroudant, koonfurta Morocco. In 2018, waxay u guurtay Casablanca waxayna ku biirtay Xafiiska Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ee SOS ee Tuulooyinka Carruurta, halkaas oo ay ku taageertay ururada xubnaha ka ah gobolka oo dhan horumarinta horumarinta ururinta hay'adaha.
In kasta oo khibradeeda xirfadeed ay inta badan ka jirtay arrimaha xuquuqda carruurta iyo ilaalinta carruurta, Marine waxay had iyo jeer iskaa wax u qabso ugu qabataa ururada difaaca xuquuqda muhaajiriinta iyo qaxootiga. Waxay aaminsan tahay siyaasadaha taageersan soogalootiga iyo in bulshada laga dhigo mid soo dhaweynaysa muhaajiriinta. Aad ayey ugu faraxsan tahay inay noqoto Agaasimaha Horumarinta cusub ee CIRC iyo inay taageerto dadaallada ururinta ururku!
Isuduwaha Khadka Tooska ah
Soo galooti hawlkar ah ahaan, Carolinawaayo-aragnimada tacliimeed iyo shaqo waxay ahayd dhinaca cadaaladda bulshada; Waxay la shaqeysay carruurta iyo qoysaska xaaladaha nugul ee u dagaallamaya caddaaladda iyo sinnaanta. Waxay aad u xiiseysaa ka shaqaynta bulshada si ay u difaacdo xuquuqul insaanka iyo dhisidda bulsho sinnaan leh.
Carolina waa Colombian iyo qaxooti ku ah Maraykanka. Waxay Ilaah ugu mahad naqaysaa waaberiga cusub, laakiin waxay u malaynaysaa in iftiinku aanu u iftiimin dadka oo dhan isla xoogga, sidaas darteed waxay si firfircoon uga shaqeysaa jacayl iyo ixtiraam si ay u gaarto fursado badan oo qof kasta ah.
Bianey Bermudez waa jiilkii ugu horreeyey, Denver oo asalkiisu ku yaal Chihuahua, Mexico. Qoyskeedu waxay bilaabeen safar ay kaga tallaabayaan xadka 30 sano ka hor iyagoo rajaynaya mustaqbal wanaagsan oo jiilka soo socda ah. Bermudez waa MSU Denver oo ka qalin jabiyay Bachelor of Arts in Journalism. Jacaylkeedu wuxuu ku jiraa ka shaqaynta caddaaladda bulshada iyo abuurista farqiga bulshadeeda iyada oo adeegsanaysa awoodda erayada iyo sheekada.
Kahor inta uusan ku biirin CIRC, Bermudez wuxuu ahaa Kaaliyaha Isgaarsiinta ACLU ee Colorado wuxuuna iska kaashaday maalgelinta kooxda iskaashiga ee The Giveback Colorado sannadka 2020, si wax looga qabto baahiyaha bulshada dhexdeeda iyada oo loo marayo aruurinta, abaabulidda mutadawiciinta iyo taageeridda kooxaha kale ee gargaarka guud ee gobolka oo dhan.
Lisa waxay ka shaqeyneysay in ka badan 35 sano qeybta aan macaash doonka aheyn iyadoo ka shaqeyneysa aasaaska shaqada cadaaladda bulshada. Kahor intaysan noqon Agaasimaha Fulinta ee CIRC, waxay u shaqeysay sidii ED ee Grassroots Grantmakers, oo ah urur xubin qaran oo aasaasi ah iyo maalgeliyeyaasha kale ee ka shaqeeya kor u qaadista codadka aasaasiga ah iyo hoggaaminta samafalka.
Laga soo bilaabo 1995 ilaa 2014, Lisa waxay la shaqaysay Xuquuqda Dadka oo dhan, ururkii ugu horreeyay ee soogalootiga hoggaamiya xuquuqda soogalootiga ee fadhigiisu yahay Aurora, Colorado. Sideed sano ka dib tabaruce ahaan, waxay noqotay ED-keedii ugu horreeyay, oo u adeegta 11 sano. Intii ay ku jirtay RAP, waxay sidoo kale aasaastay Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado iyo Xarunta Xuquuqda Aadanaha ee Aurora, oo ah mashruuc soo-galootiga iyo is-dhexgalka qaxootiga ee magaalada ugu kala duwan ee Colorado.
Khibrada hore ee Lisa waxaa ka mid ah adeega ED ee Clinica Tepeyac, iyadoo keeneysa daryeel caafimaad oo dhaqan ahaan haboon iyo adeegyo caafimaad oo kahortag ah kuwa caafimaad ahaan aan loo helin; ka tababare ahaan iyo cilmi-baarena ka ahay Machadka Grassroots ee tababarka lacag-ururinta; Xarunta Shaqada / Istaraatiijiyadda Bulshada, iyo adeegga iskaa wax u qabso ee Xarunta Cilmi-baarista iyo Waxbarashada ee Highlander ee Knoxville, TN iyo Mashruuca Dhaqdhaqaaqa Dhismaha.
2018, Lisa waxay aasaastay shirkad la-talin, Rivers Crossed Consulting, oo ka shaqeysa dhisida awooda iyo badalida xiriirka ka dhex jira waaxda aan macaash doonka ahayn.
Agaasimaha Abaabulka iyo Xubinnimada
Erik Garcia, oo asal ahaan ka soo jeeda Mexico, ayaa abaabulayay qayb ka mid ah dhaqdhaqaaqa cadaaladda muhaajiriinta ee la dagaallama xarigga iyo masaafurinta muddo toddobo sano ah.
Ka hor inta uusan ku biirin CIRC, Erik wuxuu ahaa U-doodaha Siyaasadeed iyo Abaabulaha ACLU SoCal, halkaas oo uu kala shaqeeyay bulshooyinka kala duwan ee ka tirsan Degmooyinka Orange iyo Gobolka oo dhan si loo dhiso isbahaysiyo u doodaya isbeddelada siyaasadeed iyo ballaarinta kaabayaasha maxalliga ah si looga jawaabo xarigga iyo masaafurinta. Wuxuu horey uga soo shaqeeyey Santa Ana's Sanctuary City Advisory Board, oo la taliya wakaaladaha magaalada iyo waaxaha sida loo waafajiyo Sharciga Magaalada Sanctuary. Erik wuxuu udub dhexaad u ahaa aasaasida iyo horumarinta Shabakada Jawaab Degdega ah ee Degmada Orange.
Kahor intuusan kubiirin ACLU SoCal, Erik wuxuu abaabulay heerka hoose ee Santa Ana, magaalo dadkeedu had iyo jeer balaariyaan fahamka waxa macquul ah markaan abaabulno. Xidhiidhada uu la dhisay qaar ka mid ah dadka ugu adkaysiga iyo hal abuurka badan dhaqdhaqaaqaani waa inuu ku dhiirrigeliyo inuu ku sii wado inuu sameeyo waxa uu kari karo si uu u dhiso dhaqdhaqaaqan oo uu gacan uga geysto xoreynteenna wadareed.
Hawlgallada & Maareeyaha Barnaamijka
Waxay ku dhalatay Michoacan Mexico, oo u soo haajirtay Maraykanka markay ahayd laba sano oo keliya, Paola waa qaataha DACA ee u adeegaya sidii Maamulaha Hawlaha iyo Barnaamijyada ee CIRC. Waxay dhigatay Jaamacadda Gobolka Metropolitan ee Denver waxayna baratay Sayniska Siyaasadda ilmo yar oo xagga Isgaarsiinta ah. Paola waxa uu la shaqeeyay ololeyaal kala duwan oo u dagaallama cimilada, xuquuqda ilmo iska soo rididda, iyo xuquuqda soogalootiga. Waa hadafkeeda in ay gacan ka geysato in adduunkan laga dhigo meel u wanaagsan qof walba iyada oo aan loo eegin jinsiga, nooca galmada, heerka socdaalka, ama heerka dhaqan-dhaqaale. Qof kastaa wuxuu mudan yahay inuu noloshiisa ku noolaado nabad.
Maareeyaha Adeegyada Sharciga
JuanDavid Garza waa nin reer Texas ah oo u guuray Colorado si uu u sii wato tacliinta sare. Wuxuu ka qalin jabiyay bishii Meey ee sanadka 2020 iskuulada ganacsiga ee LEEDS wuxuuna la yimid xamaasad weyn cadaalada bulshada iyo sinaanta. Xirfadiisa miyuusigga, JD wuxuu rajeynayaa inuu u keeno bogsiin naftiisa iyo dadka kale shaqadiisa CIRC.
Gladis Ibarra, waxay ku dhalatay Zacatecas, Mexico, waxay u haajirtay Mareykanka iyadoo 8 jir ah. Boulder ilaa Broomfield, waxay ku barbaartay Colorado waxayna ka qalin jabisay 2008 Dugsiga Sare ee Vantage Point. Gladis wuxuu tabaruce firfircoon ka ahaa CIRC ilaa iyo 2012. Bishii Sebtember ee 2017 DACA ayaa hanjabaad iyo maamul kala noqotay, Gladis wuxuu kaqeybqaatay socodkii balaarnaa ee Dugsiga Dadweynaha Denver halkaas oo ay ardaydu u aadeen Jaamacada Metro State University. Sannadkan waxay ku biirtay shaqaalaha iyada oo ay wehel u tahay Gobolka Denver muddo 3 bilood ah. Waxay hada kubiirtey kooxda waqti buuxa sida iskuduwaha cusub ee Khadka Tooska ah iyo taageerada Qabanqaabiyaha Gobolka Denver. Maaddaama ay tahay qof qaata DACA, dareenka Gladis waa waxa ugu weyn ee ku riixaya iyada dagaalkan si loo ilaaliyo qoyskeeda, bulshadeeda. Waxay ku faraxsan tahay inay awood u yeelato inay waqtigeeda iyo xooggeeda u hurto la dagaallanka iyo difaaca dadka iyada la mid ah.
Gladis Ibarra oo ku dhalatay Zacatecas, Mexico, waxay u haajirtay Mareykanka iyadoo 8 jir ah. Boulder ilaa Broomfield, waxay ku barbaartay Colorado waxayna ka qalin jabisay 2008 Dugsiga Sare ee Vantage Point. Gladis wuxuu tabaruce firfircoon ka ahaa CIRC ilaa iyo 2012. Bishii Sebtember ee 2017 DACA ayaa hanjabaad iyo maamul kala noqotay, Gladis wuxuu kaqeybqaatay socodkii balaarnaa ee Dugsiga Dadweynaha Denver halkaas oo ay ardaydu u aadeen Jaamacada Metro State University. Sannadkan waxay ku biirtay shaqaalaha iyada oo ay wehel u tahay Gobolka Denver muddo 3 bilood ah. Waxay hada kubiirtey kooxda waqti buuxa sida iskuduwaha cusub ee Khadka Tooska ah iyo taageerada Qabanqaabiyaha Gobolka Denver. Maaddaama ay tahay qof qaata DACA, dareenka Gladis waa waxa ugu weyn ee ku riixaya iyada dagaalkan si loo ilaaliyo qoyskeeda, bulshadeeda. Waxay ku faraxsan tahay inay awood u yeelato inay waqtigeeda iyo xooggeeda u hurto la dagaallanka iyo difaaca dadka iyada la mid ah.
Ku biirista CIRC ee Maareeyaha Siyaasadda waa riyo rumowday! Tan iyo markii Raquel lahaa dhadhankeedii ugu horreeyay ee asal ahaan abaabulka dugsi sare ololihii Obama ee 2012 si loo ilaaliyo asxaabta iyo kuwa ay jecel yihiin ee hadda codsaday DACA, waxay aad u xiisaynaysay inay gacan ka geysato kobcinta siyaasaddayada soogalootiga iyo awoodda siyaasadeed ee halkan Colorado . Sida jiilka kowaad ee ka qalin jabiyay kulliyadda iyo Chicanx/Latinx major, waxay dib ugu soo laabatay Colorado ka dib kuliyad si ay u xoojiso bulshadeeda oo ay u kordhiso fursad u helida dhammaan gobolkayaga.
Doorashadii xilliga dhexe ee 2018, Raquel wuxuu u shaqeeyay sidii Isuduwaha Goobta Difaaca Qoyska oo ay la socoto CIRC oo hogaamineysa dadaalka ka qeybgalka bulshada ee CIRC ee Aurora si kor loogu qaado siyaasadaha magaalada cibaadada iyo tamarta soo galootiga iyo codbixiyaasha POC. Waxay rajeyneysaa inay la sii korodho CIRC iyo dhaqdhaqaaqa xuquuqda muhaajiriinta ee Colorado si ay u sii wadaan farsamaynta xaqiiqooyinka wanaagsan iyo mustaqbalka bulshadayada wadajirka ah.
Abaabulaha Gobol ee Galbeedka
Clara waxay ku faraxsan tahay inay ku biirto CIRC iyada oo ah Qabanqaabiyaha Gobol ee Galbeedka! Maaddaama ay tahay gabadha soo galootiga ah, waxay aad u xiisaynaysaa inay bilawdo inay xiriir ka dhex sameyso gobolka oo dhan isla markaana ay qayb ka qaadato sidii Colorado ay u noqon lahayd meel soo dhoweyn iyo soo dhoweyn u wanaagsan soogalootiga.
Clara waxay ku qaadatay shahaadada Culuumta Caalamiga iyo Cilmiga Anthropology ee CU Boulder. Iyada oo qayb ka ah waxbarashadeeda, waxay bilo kooban ku qaadatay wadamada Nepal iyo India iyadoo cilmi baaris ka waday iyadoo la shaqeyneysa xubnaha bulshada Tibetan. Waxay ka baratay dadaalkooda sidii loo ilaalin lahaa dhaqanka Tibet-ka iyada oo laga faquuqayo dalkooda hooyo iyo xaaladooda qalafsan ee qaxootinimo. Khibraddan oo dhan waxay si gaar ah u xiiseyneysay xuquuqda aadanaha waxayna sii waday inay la shaqeyso dadyowga kala duwan. Markii ay qalin jabisay, waxay la noolayd qoyskeeda dhowr bilood Uruguay ka dibna waxay u guurtay Japan iyadoo xubin ka ah barnaamijka JET. Tani waxay siisay fursad ay ku kobciso iskaashiga dhaqamada kala duwan iyo istiraatiijiyadda horumarinta waxbarashada luqadda Ingiriisiga iyadoo la shaqeyneysa xubno ka tirsan beel yar oo miyi ah.
Hadda markay ku soo laabatay Mareykanka, Clara waxay ku faraxsan tahay inay adeegsato asalkeeda dhaqammada kala duwan iyo khibradaha ay ku leedahay dibedda si ay gacan uga geysato sidii isbeddel togan loogu soo dabbaali lahaa dalkeeda hooyo heer hoose!
Ian wuxuu ku dhashay kuna soo barbaaray Houston, Texas wuxuuna 2012 u guuray Denver si uu uga qayb galo Jaamacadda Denver si uu u barto Sayniska Siyaasadda iyo Ganacsiga. Intii aan dhiganayay DU, Ian wuxuu bilaabay inuu si firfircoon uga dhex muuqdo kooxo arday oo kala duwan si wax looga qabto arrimaha ku saabsan nidaamka sinnaan la'aanta ka jirta xerada iyo sidoo kale takoorka uu dareemay inuu yahay transman queer trans furan. Tani waa halka uu ka helay hamigiisa cadaaladda bulshada.
Ian wuxuu ku dhexjiray Aqalka Wakiilada ee Colorado wuxuuna ka shaqeeyey ololeyaal siyaasadeed oo kala duwan si loogu doorto horyaal horusocod ah xafiiska. Kahor intuusan ku biirin CIRC, Ian wuxuu u shaqeeyay sidii Abaabulaha Dijital ee United ee Dhaqaalaha Cusub - waa urur u dagaallama caddaaladda dhaqaalaha iyo guryaha. Intii uu joogay UNE, Ian wuxuu ka shaqeeyay abaabulka dadka ka soo jeeda guud ahaan Colorado si uu ugu dagaallamo Lacag Bixinta Qoyska iyo Fasax Caafimaad oo loogu talagalay shaqaalaha oo dhan iyo 2020, Coloradans waxay awood u yeesheen inay ku soo gudbiyaan dadaalkan codbixinta.
Ian aad bey ugu hanweyn tahay inuu qeyb ka noqdo CIRC oo u doodaya dhamaan Coloradans, iyadoon loo eegin xaaladooda socdaal.
Abaabulaha Gobolka Denver
QC waa Abaabulaha Gobolka Denver ee Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC). Waxay shaqadeeda ka bilawday cadaalada isgoysyada qiyaastii 18 jir, iyadoo diiradda saareysa ka hortagga madoowga ee bulshada AAPI, sinnaanta jinsiga, iyo xuquuqda LGBTQ. Waxay u ololeysay urur quaker qaran oo loogu talagalay tamar nadiif ah iyo siyaasadaha isbedelka cimilada, iyo xuquuqda muhaajiriinta ee safarkooda ku bilaabay dhaqdhaqaaqan. QC sidoo kale waxay ka shaqaysay Colorado State Capitol iyada oo ah kaaliye sharci-dejin ah, iyada oo inta badan waqtigeeda u hurtay biilka cilmi-baarista ee ku saabsan bulshada guri-la'aanta ah ee ku soo kordheysa Colorado. Waqtigeeda waqtiga fasaxa ah, waxay jeceshahay inay ku wada sheekaysato casho ku saabsan xukumida shaqada galmada, baabi'inta boqortooyooyinka Mareykanka, iyo daawashada dambiga dhabta ah ee qoyska.
Siena waxay ku firfircoonayd dhaqdhaqaaqyada cadaalada tan iyo markii ay ka qalin jabisay Haverford College oo ay ka qaadatay BA suugaanta Isbaanishka 2014. Markii ugu horaysay ee lagu tababaray dhaqdhaqaaqa OCCUPY ee Philadelphia, Siena waxay si qoto dheer u maal galisay arimaha xuquuqda muhaajiriinta iyadoo ka shaqeyneysa Magaalada Mexico City ee Casa de los Amigos, a aan faa'iido doon ahayn oo diiradda lagu saaray arrimaha soogalootiga iyo caddaalad darrada dhaqaale. Halkaas, waxay ka shaqeysay isbahaysi u heellan wax ka qabashada qaar ka mid ah sababaha asalka u ah socdaalka khasabka ah: guul darrooyinka boqortooyadii Mareykanka iyo neoliberalism. Kadib waxay u guurtay El Paso, Texas halkaas oo ay ka shaqeynaysay taageerida Annunciation House barnaamijkeeda deg-degga ah ee soogalootiga.
Siena waxay dib ugu laabatay Colorado si ay uga shaqeyso Joseph Law Firm, oo ah shirkad sharciga ka shaqeysa arrimaha socdaalka, si ay u noqoto kaaliyaha sharciga. Siena waxay noqotay abaabulaha maxaliga ah ee firfircoon Colorado Springs ee dhaqdhaqaaqa caabbinta tarxiilka. Waxay gacan ka geysatay helitaanka Isbahaysiga Sanctuary ee Colorado Springs waxayna xubin firfircoon ka ahayd kooxda xubin ka ah CIRC ee Grupo Esperanza. Siena waxay ku biirtay CIRC iyada oo ah Abaabulaha Gobollada Koonfurta laga bilaabo 2018-2019. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah Maareeyayaasha Abaabulka iyo Ololaha ee CIRC, Siena waxay hadda diiradda saareysaa hagaajinta SB251 Liisanka Wadista ee Dhammaan barnaamijka, isku-dubaridka Isbaheysiga I Drive / Yo Manejo iyo u dagaallanka asturnaanta xogta dhammaan.
Su'aalaha la xiriira SB251 Shatiga Wadista: Email
Maamulaha Khadka Tooska ah
Asal ahaan waxay ka timid Puebla, Mexico, Laura waxay ugu yeeraysay Denver gurigeeda ilaa 13 jir. Iyadoo ay leedahay Associates of Applied Science Degree ee Qorista / Tilmaamaha Filimka & Telefishanka ee Iskuulka Filimada ee Colorado, filimkeedii ugu horreeyay ee dukumiinti ah: "Qofna Laguma Sheegi Doono Sharci Darro" oo lagu soo bandhigay 2011 Denver International Starz Film Festival. In 2017, Laura wuxuu ahaa Soosaaraha filimka dukumiintiga ah: "Five Dreamers", oo laga sii daayay Rocky Mountain PBS iyo National PBS. Laura waxay xubin firfircoon ka ahayd bulshada wadajirka ah ee Colorado ilaa sanadkii 2016 waxayna sanadkaan 2018 noqotay Maareeyaha Mashruuca & Kaqeybgalka Mashruuca UndocuAmerica ee Tiyaatarka Motus, halkaas oo ay kusii waday inay u shaqeyso sidii wax qabade UndocuMonologues ah. Laura waxay hadda u shaqeysaa Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado iyada oo ah Isuduwaha Khadka Tooska ah ee khadka tooska ah ee warbixinta dhacdada ICE.
Khadka Tooska ah ee Khadka Tooska ah ee Jawaabta Colorado: 1-844-864-8341
Abaabulaha Gobollada Waqooyi
Indhaha Josh waxaa la furay sanadihii 2015 iyo 2016 halka ay sanad ka shaqeynayeen La Sagrada Familia hoy muhaajiriin ah oo ku yaal Tlaxcala, Mexico. Wuxuu la kulmay dad deris la ahaa magaalada uu ku dhashay ee San Antonio, TX iyo kulleejada magaalada Lakewood, Colorado ka dibna dib ugu soo haajiray Mareykanka ka dib markii la tarxiilay. Sheekooyinkooda ayaa dhaqaajiyay isaguna wuxuu xaqiiqsaday in xoreyntiisa ay ku xirnaan doonto tan walaalaha soogalootiga ah ee walaalaha ah.
Markii uu ku soo noqday Denver Dayrta 2016, wuxuu ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo diidmada tarxiilka. Iyadoo lala shaqeynayo CIRC's Docuteam, wuxuu qayb ka ahaa riixitaankeena ku aaddan Sharciga Virginia. Wuxuu ku faanaa guusha wadajirka ah ee laga gaadhay u baahan la-talinta xuquuqda iyo dhammaadka haynta ICE iyo wadaagista macluumaadka iyada oo aan la haysan waaran. Hore u socoshada, wuxuu sii wadi doonaa inuu riixo inuu joojiyo ogeysiisyada ICE, dadka u sheego xuquuqdooda, u kordhiyo helitaanka ilaha sharciga iyo bulshada, iyo inuu siiyo waddo muwaadinimo DHAMMAAN DADKA ku nool Mareykanka!
Aad iyo aad ayuu ugu faraxsan yahay inuu noqdo Abaabulaha cusub ee Gobolka Waqooyi! Wuxuu rajeynayaa inuu dhiso xiriiro cusub, awoodsiinta hoggaamiyeyaasha dhaqdhaqaaqa, iyo inuu qaado tillaabooyin waaweyn oo ku aaddan sidii Colorado looga dhigi lahaa gobol soogalooti saaxiibtinimo leh oo qayb ka ah isbahaysigan quruxda badan.
Laura Segura waxay ku dhalatay kuna barbaartay magaalada Mexico City. Markii ay yarayd oo ay ahayd gabadha kaliya ee ka kooban qoys ka kooban 9, waxay baratay oo kaliya inay isu taagto nafteeda laakiin sidoo kale haweenka kale ee qoyskeeda iyo beesheeda. Markii ay jirtay 16 sano waxay u haajirtay California. Waxay ahayd fursad ay ugu dooddo qoyskeeda, si ay u horumariso qaab nololeedkooda oo ay u bilaabaan dhaqan cusub oo ku saabsan caddaaladda bulshada.
Laura waxay fahantay in noloshu adagtahay; sida ay tiri, "durba waxaan nahay badbaadayaal waana waqtigii aan baran lahayn sida loogu noolaado nolosheena ugu fiican." Markii ay aragtay dhammaan khaladaadka nidaamka iyo mudnaanta ururada markii horaba la aasaasay, ayay ficil ku dhaqaaqday ka dibna hoggaamiyaha iyada ka tirsan ayaa tallaabo qaaday. Waxay aasaastay hay'ad u gaar ah oo aan faa'iido doon ahayn, Grupo Vive, oo ku taal gobolka buuraha. Thanks to CIRC iyo doorka ay ka tahay Saaxiibka Gobolka Mountain, waxay ku faraxsan tahay inay qayb ka noqoto isbedelka cadaalada bulshada.
Waxay aaminsan tahay in "dhammaanteen aan uqalmin inaan noqonno nooca ugu fiican nafteena."
Saaxiibka Gobolka Waqooyi
Miriam wuxuu ku dhashay Jerez, Zacatecas. Waxay ula haajirtay Mareykanka iyada iyo hooyadeed iyadoo yar oo laba jir ah. Waxay ku kortay Aurora, Colorado. Intii ay ku jirtay iskuullada dadweynaha, Miriam wuxuu bilaabay inuu arko arrimaha sinaan la’aanta iyo dulmiga. In kasta oo waqtigaas aysan haysan luqadda ay ku magacowdo, haddana way ogayd in waayo-aragnimooyinkaasi ay macno qoto dheer u leeyihiin nolosheeda iyo xubnaha beesheeda. Waxay go aansatay inay kaqeyb gasho Jaamacadda Colorado State University iyadoo raadinaysa Daraasaadka Qowmiyadeed iyo Daraasaadka Haweenka. Miriam waxay ku mahadsan tahay inay fursad u heshay inay si dhow ula shaqeyso macallimiinta waax kasta oo hagitaankoodu ka caawiyey inay sii wado qaabeynta hamigeeda shaqada caddaaladda bulshada.
Iyada oo la shaqeyneysa macallimiinteeda, waxay u timid inay fahamto arrimaha caddaaladda bulshada heerarka qaabdhismeedka, isdhaxgalka, iyo shaqsiyadeed. Waxay aaminsan tahay in bogsashadu ay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqada ay tahay in la qabto si wax looga qabto arrimahan heerarka oo dhan waxayna xiiseyneysaa sida dhaqanka bogsigu uga dhaqaajin karo bulshooyinka qaababka badbaadada / jiritaanka xaalad nololeed iyo barwaaqo. Waxay rajeyneysaa inay la shaqeyso bulshooyinka si loo helo siyaabo lagu bogsado iyada oo loo marayo shaqada caddaaladda bulshada.
Saaxiibka Gobolka Koonfurta
Asal ahaan waxay ka timid Montevideo, Uruguay, Valentina waxay degtay magaalo yar oo ku taal Koonfurta Colorado iyada iyo waalidkeed iyo walaalkeed ka weyn 2002 da'da 4.
Intii ay dhiganeysay iskuul yar oo ku yaal halkan Colorado, waa la takooray sababo la xiriira xaaladda soogalootiga ee qoyskeeda. Markii ay iskuullada wareejisay ka dib, waxay xaqiiqsatay waxa loola jeedo in aan la diiwaangelin laakiin siyaasad kuma ay biirin maxaa yeelay ereyadeeda "ma ahayn koobkeedii shaaha." Taasi waxay ahayd ilaa Maamulka Trump ay ku hanjabeen inay ka saarayaan DACA sanadkii 2017 halkaasoo ay ku ogayd inaysan aamusnaan karin mar dambe. Waxay bilowday inay la wadaagto sheekadeeda ku saabsan noqoshada wargeysyada maxaliga ah, ururada CSU-Pueblo oo ay weheliso kuwa kale ee qaata DACA waxayna dhawaan la shaqeysay Dhallinyarada Invincibles si ay uga caawiyaan inay u ansixiyaan Aqalka Sare 21-077 aqalka iyo guurtida.
Waxay dhowaan ka qaadatay shahaadada BS ee cilmu-nafsiga iyada oo ilmo yar oo Isbaanish ah ka qaadatay CSU-Pueblo waxayna qorsheyneysaa inay hesho shahaadada mastarka sannadaha soo socda. Waxay rajeyneysaa inay noqoto la-taliyaha dugsiga hoose.
Madadaalo ahaan, Valentina waxay kaheshaa la shaqeynta muusig aad uqurux badan, waqti tayo leh laqaata asxaabta & qoyska, ama kaliya aqriso buug wanaagsan, doorbidayo biblekeeda
Saaxiibka Gobolka Denver
Wuxuu ku dhashay Mexico, Alexis wuxuu u haajiray Mareykanka isagoo jira lix sano. Wuxuu sameeyay dhaqdhaqaaqyo waawayn sanadkii 2020: wuxuu noqday jiilkii koowaad ee qalin jabiya kuliyadaha iyadoo lagu gudajiray masiibo buuxda, oo kasbatay shahaadada sayniska siyaasada; u guuray Denver, CO, ka dib markii aan ku noolaa MN 15 sano oo toos ah; wuxuuna ka tagay booskiisii ​​Machadka Aspen si uu uga shaqeeyo xaquuqda soo galootiga waqti buuxa. Alexis wuxuu noogu yimid abaabul urur, olole siyaasadeed oo maxalli ah, iyo khibrad u doodista guryeynta oo la awoodi karo. Maalmaha uu fasaxa yahay, waxaad ka heli kartaa isaga oo ku sugan xaflad xaflad furfuran oo gabay ah, oo ugaarsanaya jeex ka mid ah daaqadaha kalluunka panaderias, ama saaxiibo iyo reer